Ma u baahan tahay inaad soo amaahato lacag? Credit iyo deymaha yihiin labada dhinacba inaad soo amaahato lacag. qaar ka mid ah amaahashada amaan badan tahay kuwa kale. Baro kaararka deynta, amaahda degdegga ah iyo hababka ugu fiican inaad soo amaahato lacag.
Sawirka Haelliott / Wikimedia Commons
Waxaad isticmaali kartaa credit card si ay ugu bixiyaan waxyaabaha halkii la isticmaalayo lacag caddaan ah. Si aad u bixiso dukaan, waxaad ka dhigi kaar caag yar oo mashiin. Telefoonka ama internetka, waxaad geli kartaa ama ku odhan karaa lambarka kaarkaaga iyo password.
kaararka deynta waa mid fudud oo ammaan in la isticmaalo for gadanaysid iyo bixinta biilasha. Laakiin waxay leeyihiin khataro. Haddii aadan dib u bixiso kaarka deynta bil kasta, waxaad bixin doontaa xiisaha. Interest waa lacagta aad bixiso on top of waxa aad amaahatay. The dambe aadan bixin, xiiso badan oo aad ka qabtid. Dad badan ayaa ku America leeyihiin deynta weyn, sababtoo ah kaararka deynta.
Waxaa laga yaabaa inaad ma rabto in aad isticmaasho kaarka deynta ah sababtoo ah khatarta ah ee u galo dayn. Laakiin waxa ay noqon kartaa mid faa'iido u sabab kale: si ay u bilaabaan taariikhda credit aad. taariikhda credit waa diiwaanka wixii aad amaahatay iyo sida ugu wanaagsan ee dib aad u bixisay. A taariikhda credit wanaagsan ka caawisaa in la dhiso credit. Haddii aad dhiso credit, waxaad ka amaahan kartaa lacag marka aad u baahan tahay, waayo, waxyaalaha weyn, sida gadashada baabuurka ama guri.
Sidaas waxaad u baahan tahay kaarka amaahda si ay u dhisaan taariikhda credit aad. Laakiin shirkadaha credit card aadan siin doonaa kaarka deynta haddii aad horey u credit wanaagsan!
Laakiin sidee baan u dhisi karaa taariikhda credit aan credit card?
Waxaad bilaabi kartaa kaarka deynta xaqiijisatay. Stilt bixiyaa kaararka deynta xaqiijisatay soo guurey iyo dadka kale ee halgan si ay u dhisaan credit. kaararka deynta xaqiijisatay yihiin run ahaantii ma amaah maxaa yeelay, aad hore u siin lacagta, ama qof ayaa ku ballanqaaday inuu siinayo kuu. Laakiin waxay u oggolaadaan in aad si ay u dhisaan credit wanaagsan. Bangiyada iyo shirkadaha credit card ayaa xaqiijisatay kaararka deynta, aad. Stilt leeyahay dulsaarka hoose iyo nidaam u fududahay in ay ka codsan badan shirkadaha kale. Sidaas samayn ururada shaqaalaha credit.
Ku biir urur credit a
ururada Credit waa sida bangiyada, laakiin waxa ay isku dayaan in ay caawiyaan dadka ku guulaystaan. Kooxda heysata The account oo dhan wada leedahay ururka credit ah. ururada Credit caawin by lacagaha deenta ama la siiyo kaararka deynta dadka uu dakhligoodu yar yahay iyo dadka taariikhda credit lahayn. Waxay kaa caawin doona inaad badbaadiyo lacagta, aad. Waad awoodaa heli credit union kuu dhow
Waxaa jira dhawr nooc oo kala duwan oo ah deymaha aad ka heli karto. Qaar ka mid ah xaaladaha degdegga ah muddo-gaaban, halka qaar kalena ay yihiin muddo dheer xaaladaha muddada dheer, sida iibsashada guri.
amaahda degdegga ah waxaa loogu talagalay dadka si deg deg ah u baahan yihiin lacag kaash ah. Dadka lacagta ka soo gasho amaahiye amaahan inaad dib u bixiso maalinta ay lacag. Laakiin amaahda degdegga inta badan keenayso dhibaato lacag ka halis badan aad bilowdo leh. Helitaanka amaah degdegga ah waxay ka dhigan tahay in aad hore u leedahay lacag yar si aad u hesho iyada oo ilaa jeegaaga soo socda. Sidoo kale, Wonga ka qaadaan badan oo xiiso leh. Oo sidaas waa inaad dib u badan oo ka badan inta aad ka amaahan bixin. Oo haddii aadan bixin dib markii, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso dulsaar xitaa more.
Maalinta mushaarka Alternative Amaahda (Pal)
ururada Credit siin karaan doorasho wanaagsan xaaladaha degdegga badan amaah degdegga ah: amaah kale degdegga ah (Pal). Pal A waa amaah muddo gaaban ah ma si aad si aad u hesho amaah degdegga ah. Waxaad amaahan kartaa ilaa $1,000 mana ay ka qaadaan doonaa xiisaha aad u badan. Waxaad u leeyihiin in ay xubin ka mid ah ururka credit muddo bil ah ay noqon ka hor inta aadan qaadan kartaa Pal a.
Amaahda waa deyn dadka u hesho inuu guri ka iibsado. Waxaa jira lacag badan oo in la sameeyo bil kasta. Laakiin mararka qaarkood wax ka badan kirada bixiso waa, iyo dhamaadka, aad gurigaaga leedahay doonaa! Way adkaan kartaa in la helo amaahda. Laakiin waxaa laga yaabaa in ururka credit aad kuu caawin. Read ku saabsan amaahda aan US muwaadiniinta. Maamulka Housing Federaalka idin bara ku saabsan amaahda kala duwan oo waxaan idin barayaa karaa sida si loo badbaadiyo lacag on gurigaaga cusub.
barnaamijyo dhowr ah ee guud ahaan Maraykanka caawimo qaxootiga iyo doolka bilaabaan ganacsi iyaga u gaar ah. Waxay ku siin deyn iyo taageero kale, sida talo ganacsi oo lacag seminaaro. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah:
In Sacramento, CA - Albaabada ay furan yihiin
In City New York - Business Center for Americans New
In Washington, DC, iyo Baltimore - Horumarinta Dhaqaalaha Latino Center
In Atlanta, Georgia - On Kac Xarunta Financial
horumarinta Bulshada hay'adaha maaliyadeed (CDFIs) waa sida ururada shaqaalaha credit. Ma doonayaan in faa'ido laga helo adeegyada ay. halkii, ay doonayaan in ay caawiyaan dadka ku guulaystaan. CDFIs wax amaahisaan lacag si ay ganacsi yar yar, ganacsiga cusub, iyo in la dhiso homes.You la awoodi karo heli CDFI kuu dhow.